Sun, Aug 19, 2018 | 07:19:12 NST
लालपुर्जा लगायतका कागजात नहुने भूकम्पपीडितले पनि अनुदान पाउने
काठमाडौं, चैत २५ – लालपुर्जा लगायत यसअघि अनिवार्य भनिएका कागजात नहुने भूकम्पपीडितले पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउने भएका छन् । धेरै भूकम्प पीडित अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुने भएकाले लालपुर्जा लगायत कागजात नभएका पीडितलाई पनि अनुदानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।
शुक्रबारबाट नयाँ संवत्सर, सबैलाई राम्रो फल मिल्ने
काठमाडौं, चैत २५ – चन्द्रमासअनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत २६ गते शुक्रबारदेखि सौम्य नामको नयाँ संवत्सर सुरु हुँदैछ । सौम्य नामक संवत्सर सुरु भएपछि पृथ्वीवासीलाई राम्रो फल मिल्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
अतिरिक्त सुविधा नदिए गाविस सचिवले पुनर्निर्माणको काम नगर्ने
सिन्धुली, चैत २५ – सिन्धुलीका गाविस सचिवहरुले अतिरिक्त सुविधा नदिए भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण काम नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जाजरकोटमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आउँदै
काठमाडौं, चैत २५ – केही दिन अघि जाजरकोटमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार झाडापखाला प्रभावित जाजरकोटको दशेरा गाविसमा डाक्टरसहितको टोली खटिएको छ ।
नेपालमा मधुमेहका रोगी बढे
काठमाडौं, चैत २५ – विश्व स्वास्थ्य दिवस, 'मधुमेहको रोकथाम गरौँ, समयमा नै उपचार गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखौंँ' भन्ने नाराका साथ बिहीबार मनाईंदैछ । विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि मधुमेहका विरामी वर्षेनी बढ्दै गएका डाक्टरले बताएका छन् ।
पेट, कलेजो, पित्त थैलीसम्बन्धी रोगको बिना शल्यक्रिया उपचार सुरु
भक्तपुर, चैत २५ – मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले इआरसिपी प्रविधिबाट पेट, कलेजो र पित्त थैलीमा रहेको पत्थरीको बिना शल्यक्रिया उपचार सेवा सुरु गरेको छ ।
‘पानामा पेपर्स’ कर छली काण्डमा मुछिएका नेपाली को को ?
काठमाडौं, चैत २५ – अमेरिकी देश पानामाको मोसाक फोनसेक कानूनी फर्मबाट चुहावट भएको कागजातमा कर छली तथा अवैध सम्पत्ति राख्नेमा १३ जना नेपाली परेका छन् ।
​भूकम्प पीडितले टोल फ्री नम्बर मार्फत अनुदान रकम बारे बुझ्न सक्ने
काठमाडौं, चैत २४ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितले पाउने अनुदान रकमको बारेमा जानकारी दिन निःशुल्क टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
छिट्टै ग्यास सहज हुने निगमको दाबी
काठमाडौं, चैत्र २४ – नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले केहीदिनभित्रै एलपी ग्यास सहज हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
​श्रम स्वीकृति थाहा पाउन एसएमएस गर्ने नम्बर परिवर्तन
काठमाडौं, चैत २४ - वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृतिको बारेमा थाहा पाउन प्रयोग गर्ने एसएमएस सेवाको नम्बर परिवर्तन भएको छ । यसअघिको ४००१ नम्बर परिवर्तन गर्दै ३४००१ बनाएको हो ।
लोडसेडिङ अघोषित रुपमा घट्यो
काठमाडौं, चैत २४ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ घटाएको छ । नदीमा पानीको स्तर बढेकाले आधादेखि एक घण्टासम्म लोडसेडिङ घटाउने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
झाडापखालाबाट कसरी जोगिने ?
मदन पौड्याल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत २४ – जाजरकोट दसेराको एसएलसी परीक्षा केन्द्रमा झाडापखालाको संक्रमणले परीक्षार्थी र शिक्षक नै बिरामी परेका छन् । दसेरा स्वास्थ्य केन्द्रका अहेव विष्णु गिरीका अनुसार बिरामीमा भाइरल ज्वरो र झाडापखालाको लक्षण देखा परेको छ । एसएलसी दिने विद्यार्थी र परीक्षामा खटिएका शिक्षकलाई मात्र होइन, झाडापखालाबाट अरु पनि बिरामी छन् ।
अघि बढ्यो बुढीगण्डकी आयोजना, ४५ हजार भन्दा धेरैले थातथलो छोड्नुपर्ने
नारायण अधिकारी/उज्यालो । काठमाडौं, चैत २४ – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले चैत २० र २१ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकाली जग्गा किनबेचमा रोक्का गरेसँगै आयोजनाको काम अब तीब्र गतिमा अगाडि बढ्ने देखिएको हो ।
​अतिरिक्त सुविधा नदिए पुननिर्माणको काम नगर्ने गाविस सचिवहरुको घोषणा
ओखलढुंगा, चैत २३ – ओखलढुंगाका गाविस सचिवहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अतिरिक्त सुविधा नदिए नगर्ने बताएका छन् । अतिरिक्त कामको अतिरिक्त सुविधा नदिएसम्म पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काम नगर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
युएईमा नेपाली मुलकी भारतीयलाई २० करोड ३० लाख र नेपाली नागरिकलाई २७ लाखको चिठ्ठा
उमाकान्त पाण्डे /उज्यालो । युएई चैत २३ - संयुत्त अरब एमिरेट्स युएईको आबुधाबीमा कार्यरत एक नेपाली मुलकी भारतीय नागरिकले ठुलो धनराशीको भाग्य चिठ्ठा जितेकी छिन् । सिक्किम निवासी नेपाली मुलकी सुनिना राईले बिग टिकट भाग्य चिट्ठामार्फत ७० लाख युएई दिराम अर्थात २० करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ पाउनु भएको हो । यो चिठ्ठामा एक नेपालीले चौथो पुरस्कार स्वरुप १ लाख युएई दिराम अर्थात झन्डै २७ लाख नेपाली रुपैयाँ पाएका छन् । नेपालको पूर्ण ठेगाना नखुलेका प्रकाश पौडेललाई २७ लाख नेपाली रुपैयाँ चिठ्ठा परेको हो । आबु...
बन्ने भयो काठमाडौं टावर, पुरानो बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सारिँदै
नारायण अधिकारी/उज्यालो । काठमाडौं, चैत २३ – महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सार्ने काम अगाडि बढाएसँगै काठमाडौं टावर निर्माणको काम सुरु हुने भएको छ । महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित रुपमा अन्यन्त्र सार्न नसक्दा टावर निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको थियो ।
नामावलीमा नपरेका भूकम्प पीडितले के गर्ने ?
मदन पौड्याल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत २३ – ‘तथ्यांक संकलनका लागि चैत १७ गते टोली पुग्दा घरमा बुढी एक्लै थिई, बाजे गाउँमा गएछन् के गर्नुपर्ने हो खोजेर नापेर लैजानुस् भनेपनि त्यत्तिकै फर्केछन्’ गोरखा हंसपुरका ८३ वर्षका दिलबहादुर श्रेष्ठले दुखेसो पोख्नुभयो ‘इष्टमित्र, साथीभाइले पनि भन्दिएनन् । खै कुन टोली आएका थिए रे, वास्तै गरेनछन्, अहिले त अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम नै परेन ।’
बझाङमा भूकम्प, दोलखामा परकम्प
काठमाडौं, चैत २२ – बझाङमा ४ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । सोमबार बिहान ९ बजेर ४० मिनेटमा बझाङ केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले बताउनुभयो ।
सडक र पुल निर्माणमा ढिलो गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा
खोटाङ, चैत्र २१ – खोटाङको सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस दिक्तेल नगर समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकार र म्यानपावर व्यावसायीको वार्तामा विभिन्न देशको मोडल बारे छलफल
काठमाडौं, चैत २१– सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि म्यानपावर व्यावसायीले विभिन्न देशको नजिर देखाएर निर्णय पुनर्विचार गर्न जोड दिएका छन् । आइतबार श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यन्वयन नभएको नजिर देखाउँदै नेपालमा पनि लागु नगर्न दवाव दिएका हुन् ।
क्रिसमसका दिन सार्वजनिक बिदा नदिए अनसन बस्ने चेतावनी
काठमाडौं, चैत – २१ क्रिष्टियन समुदायको चाड क्रिसमस पर्वका दिन सबै नेपालीलाई सार्वजनिक विदा दिन क्रिष्टियन समुदायले सरकारसँग माग गरेको छ । यो पर्वका दिन सबै सार्वजनिक बिदा नदिई सरकारले क्रिष्टियन समुदायलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
पुननिर्माणमा सहभागी नहुने भन्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलनमा
सिन्धुपाल्चोक, चैत २० – सिन्धुपाल्चोकका गाविस सचिवहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियानमा सहभागी नहुने बताएका छन् । भूकम्पपछिको पुननिमार्ण अभियान सुरु हुनै लाग्दा सचिवहरुले पुनःनिमार्ण सम्बन्धी कुनैपनि गतिबिधिमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलन गरेका छन् ।
१५ वर्षभित्र गरिबी घटाउने लक्ष्य, तर चुनौति धेरै
काठमाडौं, चैत २० – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी १५ वर्षभित्रमा अहिलेको गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगले अहिले रहेको २३ दशमलव ५ प्रतिशत गरिबलाई सन् २०३० भित्र ५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने गरि दिगो विकास लक्ष्य तोकेको हो ।
गाडी-मोटरसाइकल चलाउनेहरु सावधान ! गोप्रोले समाउला
नारायण अधिकारी/उज्यालो । काठमाडौं, चैत १९ - कतै तपाइँ सडकको लेन मिचेर गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? सचेत रहनुहोस् । तपाइँको गतिविधिलाई अब कैद गर्छ ट्राफिक प्रहरीको छातीमा जडित गोप्रो क्यामेराले । ट्राफिकको आँखा छलेर लेन मिच्दै गाडी चलाउनेलाई ठाउँको ठाउँ सप्रमाण कारवाही गर्ने उद्देश्यले गोप्रोको प्रयोग गर्न थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
‘साना जहाजले नलिन्याँ ठूला जहाज नपठाइ दिन्याँ’
प्रकाश पन्त/उज्यालो । सुर्खेत, चैत १९ – ‘साना जहाजले नलिन्याँ ठूला जहाज नपठाइ दिन्याँ’ जहाजको पर्खाइमा महिना दिन बस्दा पनि हुम्ला जान नपाएको भन्दै सुर्खेत विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु कुण्ठे एडीले दुःखेसो गर्नुभयो ।
१० करोड कण्डम वितरण
काठमाडौं, चैत १९ - एचआइभी एड्स नियन्त्रणका लागि भन्दै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको सहयोगमा नेपालमा अहिलेसम्म १० करोड कण्डम वितरण भएको छ ।
​बिस्केट जात्राका नाइकेको तलव नआउँदा जात्रा अन्यौलमा
भक्तपुर, चैत्र १९ - बिस्केट जात्राका नाइकेको तलव निर्धारण नभएपछि जात्रा अन्यौलमा परेको छ । बिस्केट जात्रा आउन सात दिन मात्र बाँकी छँदा पनि नाइकेहरुको तलव निर्धारण नभएपछि जात्रा अन्यौलमा परेको हो ।
७३ सालमा तीन वटा दसैँ
काठमाडौं, चैत १९ – २०७३ सालमा नेपालमा तीन वटा दसैँ परेका छन् । त्यसैले हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले ७३ सालमा तीन वटा दसैँ मनाउन पाउने भएका छन् । तीन वटा दसैं सहितको नयाँ वर्षको पात्रो सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
अब पेट्रोल भर्न लाइनमा बस्नु पर्दैन : निगम
काठमाडौं, चैत १९ – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलका लागि लाइन बस्नु नपर्ने जनाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन आइओसीबाट पर्याप्त मात्रामा पेट्रोल आयात भइरहेकाले लाइनमा नबस्न निगमले आग्रह पनि गरेको छ ।
०७३ सालमा सार्बजनिक बिदा कहिले ? (सूची सहित)
काठमाडौं, चैत १९ – सरकारले २०७३ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेपछि बिहीबार नेपाल राजपत्रमा बिदाको सूची प्रकाशित भएको छ ।
गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई दवाव
काठमाडौं, चैत १८ – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले म्यानपावर र ठगी गर्ने दलाललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौताको माग गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका १४ जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोगको जोखिम उच्च
काठमाडौं, चैत १८ – काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका १४ जिल्ला लामखुट्टेको टोकाइका कारण लाग्ने रोगको उच्च जोखिममा परेका छन् । सरकारले जोखिमयुक्त यी जिल्लामा लामखुट्टेको रोकथाम गर्न अभियान चलाउने भएको छ ।
लोकतन्त्र दिवसको सट्टा असोज ३ मा सार्वजनिक बिदा : झापाको होली बिदा पहाडमा सर्‍यो
काठमाडौं, चैत १८ – आउँदो वर्षदेखि लोकतन्त्र दिवसको सट्टा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । सरकारले आउँदो वर्षको क्यालेण्डर पारित गर्दै यो निर्णय गरेको हो । अबदेखि वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको बिदा नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकाबिहानै सिन्धुपाल्चोकमा पराकम्प
काठमाडौं, चैत १८ – सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ । बिहीबार बिहान ४ बजेर २६ मिनेटमा पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
​एसएलसी परीक्षामा सहयोग गर्न सरकारको अपिल
काठमाडौं, चैत १७ – बिहीबारदेखि सुरु हुने एसएलसी परीक्षाका लागि केन्द्रमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री र सुरक्षा ब्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालले जनाएको छ । परीक्षामा देशभरीबाट ६ लाख १५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् ।
​थानकोट-नौबिसेमा ट्राफिक जाम
काठमाडौं, चैत १७ - काठमाडौं भित्रने नौबिसे-थानकोट सडकखण्डमा ट्राफिक जाम भएको छ । झ्याप्लेखोलामा सडकको मोडमा ट्रक बिग्रेकाले एक तर्फी रुपमा मात्र गाडी संचालन भैरहेकाले जाम परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
यातायात कार्यालयमा ‘स्वयंसेवकको भेषमा पुराना दलाल आए’
अर्जुन पोख्रेल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत १७ – यातायात ब्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको गेटमै सेवाग्राहीको बाटो छेक्दै दलालले सोध्छन् ‘तपाइँको के काम पर्‍यो भन्नुस न हामी गर्दिन्र्छौ’ । पाइलैपिच्छेका झण्झटिला काम र घन्टौं कुर्नुपर्ने भएपछि सेवा लिनेहरुले पनि दलाललाई नै पैसा दिएर काम फत्ते गर्छन ।
विमानस्थलमा माइकिङ नहुँदा यात्रुलाई समस्या
विवश कुलुङ/उज्यालो । सोलुखुम्बु, चैत १६ - पर्यटकहरुको चहल पहल बढ्न थालेसँगै तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा यात्रुलाई समस्या भएको छ । नेपालकै व्यस्त विमानस्थल लुक्लामा माइकिङ सुविधा नहुँदा यात्रु समस्यामा परेका हुन् ।
हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना हावाले नै उडाउने संकेत
प्रकाश ढकाल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत १६ – सोमबार हुरी चल्दा धेरैले हावाबाट निकालिने भनेको बिजुलीको प्रसंग सम्झे र सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई व्यंग गरे । सुरुदेखि नै हावामा उडाईएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने सरकारको योजना पनि हावाहुरीले उडाएर लाने लगभग निश्चित जस्तै हुन थालेको छ ।
भक्तपुरमा हावाहुरीले उडाएको जस्ता लागेर तीन जना घाइते
काठमाडौं, चैत १५ – भक्तपुरमा हावाहुरीले उडाएको जस्तापाताले लागेर तीन जना घाइते भएका छन् । जस्तापाताले लागेर नंखेलका गणेश खत्री, सिपाडोलका प्रताप बस्नेत तथा चाँगु नगरपालिका–१ छालिङका सानुप्रसाद वन घाइते भएका छन् ।